DAAWO: Siyaasiga Nuur Ismaaciil oo $500 (shan boqol) Dollar ugu deeqay xiddigaha xulka qaranka 17 jirada!
Monday April 30, 2018 - 19:14:11 in Wararka by Warqabadka Koonfurta soomaaliya
Nuur Ismail Shiikh oo ka mid ah siyaasiyiinta da'da yar ee Somalia ayaa $500 (shan boqol) oo dollar ugu deeqay xulka 17 jirada Somalia oo kaalinta labbaad ka galay ciyaaraha Bariga iyo Bartamaha Africa.
Siyaasiga Nuur Ismaaciil wuxuu lacagta ku wareejiyay guddiga Caawin Qaran oo ah guddi wariyaal ah oo u istaagay iney lacago dhiiri galin ah u aruuriyaan xulka 17 jirada Somalia.
Dadka lacagaha ugu deeqay waxaa kamid ah Gudoomiyahii Hore Gobalka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed oo shankun dollar ugu deeqay iyo sidoo kale Xildhibaan Mahad Salaad oo shan boqol dolar ugu deeqay.
Halkaan Hoose ka Daawo Muuqaalka deeqda lacagta